काठमाडौं सानो भएपनि यहाँ धरैथोक पाइन्छ : इन्दिरा जोशी – Etajakhabar
गायिका इन्दिरा जोशीसँगको रमाइलो कुराकानी
नेपालभित्र मनपर्ने सहर ? -मेरो सबैभनदा प्यारो सहर पोखार हो ।
नेपाल बाहिर कुन-कुन देशका सहर घुम्नुभएको छ ? -मैले झण्डै ३० देशको सह घुमेको छु । अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मन, सिंगापुर, बेलायत, चीन, कोरिया, दुबई, कतार, इटली, क्यानडा, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्सलगायत देश पुगेकी छु ।
ती देशमा मननपर्ने सहर ? -इटलीको भेनस
हाम्रो देशका सहर र विदेशी सहरबीच भिन्नता ? -नेपालबाट बाहिरिनासाथ प्रदूषण धुलो देख्नुपर्दैन । तर, बाहिर छिरेर आफ्नो देश छिर्दा आफ्नो देशप्रति दया लाग्छ । जताततै फोहोर र प्रदूषण मात्रै देखिन्छ । नेपालको जस्तो हावापानी र हरियाली भने अन्तका सहरमा पाइदैन ।
उपत्यकाको सबैभन्दा राम्रो लाग्ने पक्ष ? -यो सानो ठाउा भए पनि यहाँ धरैथोक पाइन्छ । जस्तै खानेकुरा, घुम्ने र मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ, सबैखाले सरकारी सेवा सुविधा । यहाँको मौसम पनि राम्रो लाग्छ । यी कुरा सम्झँदा उपत्यका बस्न मन लाग्छ ।
यहाँका मननपर्ने पक्ष ? -ट्राफिक जाम र प्रदूषण ।
उपत्यकाको मनपर्ने खानेकुरा ? -नेवारी खाजा मनपर्छ । आजको नागरिक काष्ठमण्डपमा इन्दिरा जोशीसँगको कुराकानी प्रकाशित छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र १२, २०७४ समय: १३:४२:१९